आन्तरिक उडान भोलिदेखि सुरु हुँदै, सुरक्षित यात्राका लागि के गर्ने? (भिडिओसहित) :: Setopati
आन्तरिक उडान भोलिदेखि सुरु हुँदै, सुरक्षित यात्राका लागि के गर्ने? (भिडिओसहित)
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं,असोज ४
लकडाउनका कारण गएको चैतदेखि बन्द रहेको नियमित आन्तरिक उडान भोलिदेखि खुल्ने भएको छ।
कोरोना कहरकै बीचमा खुल्न लागेको उडानका लागि एयरलाइन्सदेखि नियमक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थलहरुले तयारी गरिसकेका छन्।
कोरोना संक्रमणलाई फैलिन नदिनका लागि भन्दै विभिन्न बाध्यकारी निमयहरु पनि लागू गरिएका छन्। अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने, ज्वरो तथा रुघाखोकी लागेर कोरोना संक्रमणको शंकास्पद देखिएकालाई उडानमा जान नदिने जस्ता नियम बनाइएको छ।
यी नियम पालना गर्दै सुरक्षित यात्रा कसरी गर्ने? यात्रुले कसरी सुरक्षित यात्रा गर्ने र एयरलाइन्सले के गर्नुपर्ने भनेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरले नियम बनाएर विमानस्थलहरुमा देखिनेगरी राख्ने व्यवस्था मिलाइसकेको जानकारी दिएको छ।
यस बाहेक एयरलाइन्सहरुले पनि यात्रु सचेतनाका लागि विभिन्न प्रबर्द्धनात्मक अभियान चलाएका छन्। यसैबीच बुद्ध एयरले यात्रका दौरान यात्रुले के कस्ता सावधानी अपाउने नियम कस्तो हुन्छ ? भन्ने विषयमा यात्रुका लागि जानकारीमुलक भिडिओ सन्देश जारी गरेको छ।
भोलिदेखि सुरु हुने उडानका लागि बुद्ध एयरको भगिनी संस्था बुध्द होलिडेजले पोखराका लागि ५ हजार ९९९ रुपैयाँ र चितवनका लागि ७ हजार ९९९ रुपैयाँको होलिडे प्याकेजहरु पनि ल्याएको छ।
दुई रात तीन दिनको यस प्याकेजमा दुईतर्फि हवाई टिकट, तारे होटलको बसाई, बिहानको खाजा तथा एयरपोर्ट पिकअपड्रप समावेश रहेको बुद्धले जानकारी दिएको छ।
यस्तो छ भिडिओ सन्देश:
कुश्माको बन्जी र स्वीङ कात्तिक १५ गतेबाट सन्चालनमा आउने